मोदीले ओलीलाई दिँदैछन् विमानस्थलमै ‘सरप्राइज’ - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मोदीले ओलीलाई दिँदैछन् विमानस्थलमै ‘सरप्राइज’
Published On : २३ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०१:५९
२३ चैत– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँदिल्ली ओर्लेको भोलिपल्ट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग विभिन्न चरणको छलफल र समारोहसहित तीन घण्टाभन्दा बढी कुराकानी गर्ने भएका छन् । मोदीको निमन्त्रणामा ओलीको यो भारतको दोस्रो राजकीय भ्रमण हो ।
निर्वाचनपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा दरिएका ओलीलाई मोदीले निकै महत्त्व दिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । बिहान राष्ट्रपति भवनमा एकपटक र हैदराबाद हाउसमा दुईपटक मोदीले ओलीसँग भेट गर्नेछन् । बैठकपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र दिवाभोजमा पनि मोदी ओलीसँगै हुनेछन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बन ाउन नै यो भ्रमण केन्द्रित हुने दुवैतर्फबाट बताइएको छ ।शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति भवनमा ‘गार्ड अफ अनर’ दिने कार्यक्रम छ । सम्मान गारतअगावै मोदीले उनलाई स्वागत गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनले मोदीसँग छलफल गरेपछि भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द तथा उपराष्ट्रपति बैंकया नायडुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा आउने भारतीय मन्त्रीको नाम खुलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री मोदीले विमानस्थलमा कुनै ‘सरप्राइज’ दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री मोदीसँग उनको औपचारिक वार्ता हैदराबाद हाउसमा हुनेछ । मोदीसँग सुरुमा एक्लाएक्लै, सीमित अधिकारीसहित र पछि औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलबीच गरेर तीन चरणमा वार्ता हुने कार्यक्रम छ । दुई देशबीच हुने सम्झौता तथा पत्र आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यक्रम भने अझै तय भएको छैन ।
सम्झौतालगायत अन्य विषयमा छलफल गर्न कार्यवाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मीको साथ दिन दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना दिल्ली आइसकेका छन् । उनीहरूले सम्झौताको विषयमा छलफल गर्ने अधिकारीहरूले बताए । कृषि क्षेत्र सम्बन्धित समझदारी कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित हुने भनिए पनि टुंगो लाग्न भने सकेको छैन ।